Tiny Tina's Wonderlands Ongororo: Iyo Better Borderlands Kutenda kune Medieval Ages - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 10, 2022 | nhau, Miedzo yemitambo, pamusoro, Vhidhiyo mitambo
Tiny Tina's Wonderlands inoratidza muyedzo kuti dingindira rinogona sei kusimudzira mutambo unozivikanwa wevhidhiyo. Misiyano yekutamba pakati peiyo fantasy tabletop offshoot neBorderlands iri pamucheto, asi mamiriro epakati anoiburitsa mukupedzisira. Chero ani achangobva kunyura awa neawa muGearbox uye 2K's loot shooter Borderlands 3 zvirokwazvo haafanire kupotsa Tiny Tina's Wonderlands.
Tiny Tina's Wonderlands akaita kusvetuka kukuru: kubva kuBorderlands DLC kuenda kumutambo wemutengo uzere. Kune vateveri veiyi nhevedzano, makore matatu mushure mekuburitswa kweBorderlands 3, izvi pakupedzisira zvinoreva kupihwa zvakare. Chaizvoizvo, hapana zvakawanda zvachinja: mutambo wemutambo, mutambo wemitambo, kuseka, dhigirii rekupenga kwevatambi - zvese zvinoyeuchidza Borderlands 2 uye nekudaro mutambo kubva kwakabva Tiny Tina dhizaini. Uye zvakadaro pane mutsauko wakakura usingangobata ziso chete, asi zvakare unowedzera zvakanyanya mutambo wevhidhiyo - zvirinani zvichienderana nekuravira kwako: mamiriro epakati.
Tiny Tina's Wonderlands: Psycho Dungeon Adventure
Nyaya yacho yakaita senyaya iri mukati menyaya: ingano yemhando yepamusoro yemukuru wevakaipa neboka remagamba, asi yakadzikwa muBorderlands 'shanduro yeDungeons & Dragons RPG yaunogona kutamba. Bunkers uye Badasses akabhabhatidzwa - uye iyo haisati ichingova vhidhiyo yemutambo gimmick, asi chaizvoizvo tabletop chaiyo RPG. Iwo mavara anopenga senge zano, pamusoro pese unicorn queen ine euphonious zita rekuti "mbongoro bhiza". Zvimwe zvacho zvinongofanana nerudzi: fairies, skeletons, shato dzakaipa, mashiripiti mazhinji - mamwe acho anooneka akasununguka, mamwe anotaridzwa, uye kazhinji neanozivikanwa kuseka à la Borderlands, iri pane imwe nzvimbo pakati pekuseka uye kutonhorera uye kupusa. se fuck.
Tiny Tina's Wonderlands mutambo wepasirese - uye chibviro chepfungwa yeBorderlands. Kwakabva: game point
Hunhu hunopenga kupfuura vese ndehweTiny Tina uye pavanhu vese ndiye tenzi wegomba anogadza "mitemo". Uye ndiani anotsanangura nyika nenjodzi dzayo. Serious? hapana. Horst? Semutambi, unowanzo kuita izvi panguva yekugadzira hunhu. Chero zvazvingava, njodzi yakakura kushandisa zvinhu zvinopenga mugamba rekuvaka kit. Chokwadi kune motto: Kana mutambo uri benzi, saka hunhu hwangu hunofanira kunge hwakaitawo.
Asi kubhuroka hakusi kungorasa kwakachena, nekuti kunotarisisa maitiro ekutamba: sarudza kirasi, sarudza chitarisiko uye izwi, sarudza mabviro uye nekudaro tanga mabhonasi, wozogovera hunyanzvi mapoinzi. Heino yemhando yepamusoro: Hupenyu hwakawanda? Kana kuti unofarira zvakanyanya kukuvadzwa? Vatambi vanogona chaizvo kuvaka hunhu hwavo zvakasununguka mushure memhuno. Zviri pachena kuti sarudzo inonyanya kukosha inowira kukirasi yemunhu, imwe neimwe iri "chaiyo nyika" shanduro yeBorderlands. Rogue, murwi, caster makirasi - anosanganisira asinganzwisisike mazita - anowanikwa, rimwe nerimwe rakagadziridzwa mune mamwe siyana.
Pa "game board" iwe unodzungaira nemufananidzo webobblehead. Kwakabva: game point
Panguva ino, iyo dombo-yakasimba uye yakakomba gameplay framework inoratidzwa zvakare kekutanga: vatambi vanogona kugadzirisa magamba avo kune yavo maitiro nekugovera mapoinzi uye kukwira kumusoro. Musanganiswa wakasiyana-siyana unogoneka, izvo zvechokwadi zvinokukoka iwe kuti uedze. Iyo inonakidza chinhu chikuru, waitoziva kuti kubva kuBorderlands, inoshandawo muTiny Tina's Wonderlands.
Tina, tiite mutambo
Nekudaro, Tiny Tina's Wonderlands anowana chaizvo kana nyaya yatanga. Zvakare uyezve unosangana nema swipes madiki papeni & mapepa classics uye yemazuva ano pop tsika, saka nguva zhinji unozvibata iwe pachako uchiwana iyo dzimwe nguva isina musoro joke yemutambo inosekesa. Iyo nyaya inotaurwa zvakadzikama uye yakafumiswa nekukatyamadza twist zvakadaro - mhando yepamusoro. Tiny Tina's Wonderlands zvakajeka kupfuura zvinotarisirwa nemharidzo. Pane imwe nguva kana imwe, ruzivo rwekare kubva kuBorderlands universe inobatsira, nekuti chete ipapo iwe unogona kunyatsonzwisisa yega gag. Nenzira, zvese zvinowanikwa muGerman, kusanganisira yakanyanya kunaka synchro.
Sezviri mumutambo chaiwo wetabletop board, unodzungaira uchitenderedza playmat nehunhu hwako mu chibi style uye kugadzirisa quests. Izvo zvakadzika-kudzika kupfuura mitambo-yekutamba, nekuti yakajairwa Borderlands gameplay inouya kumberi. Saka wave mushure mekupfurwa kune vanopikisa, midziyo uye zvombo zvinopambwa uye zvinosimudzwa. Chero ani anoziva nezveBorderlands anobva anzwa ari pamba neTiny Tina's Wonderlands. Muvengi AI haana kunyanya kungwara, asi maminions anomuka muhuwandu hukuru. Kune rimwe divi, vatambi vanofanirwa kuramba vachifamba, vazvimise zvine hungwaru uye vadzivise projectiles kuitira kuti varege kukuvadzwa. Nekune rimwe divi, ndezvekubvisa kukuvadza kwakawanda sezvinobvira, kana zvirinani zvakanyatsonaka sezvinobvira. Mukuwedzera, kune kupfura uye mashiripiti, uye zvichienderana nekirasi yakasarudzwa, kunewo kurohwa nekuda kweiyo yakagadziridzwa post-combat system. Kazhinji iwe unofanirwawo kutarisisa kune simba uye kusasimba kwevanopikisa, avo vasingawanzo kuve nengozi, asi dzimwe nguva kuwana zvakawanda kana ukasangwarira.
Tiny Tina's Wonderlands ine chimiro chakafanana neBorderlands. Chete kuseta ndiko kutsva uye nhanho yeruzivo iri pamusoro zvishoma. Kwakabva: game point
Saka mutambo mudiki unoenderera mberi nebasa nebasa uye nhanho yemutambi nenhanho yemutambi. Tiny Tina's Wonderlands haina kuratidza kuve yakanyanya hunyanzvi panguva ino. Izvi zvinoregererwa, zvisinei, nekuti iyo yekutamba yakakosha, kureva kuvhima kwemidziyo iri nani, inokurudzira zvakanyanya. Dzimwe nguva unoremerwa nezvinhu zvakapambwa uye mabhokisi zvekuti zvinoita kunge zvinokuremera. Pakupedzisira, zvishoma zvingave zvakawanda pano. Zvakadaro: mufaro unowanzo kuve mukuru kana chinhu chichigona kuwanikwa pakati pese akaunganidzwa clutter anoita kuti chimiro chive nesimba kana kuti chinoshanda, semuenzaniso nekuvandudza mamiriro ekukuvadzwa.
Kurova shato Ishe
Iwe unopedza maawa makumi maviri nemashanu kusvika kumakumi matatu uchidzingirira shato yakaipa ishe, uye iwe unogona kuwedzera kunakidzwa zvishoma nemamisheni epadivi anogona kuwanikwa pa "mutambo bhodhi". Nenzira, izvi zvakagadzirirwa zvinosekesa, nekuti Tiny Tina haanetse nezvinhu kubva ku "nyika chaiyo" kuitira kuti ape vatambi vevhidhiyo vane hukama hwemitambo yebhodhi inoyevedza yetafura yekumisikidza. Rwizi rweremonade runoyerera nemunyika, mabhodhoro evhavha anoshanda semabhiriji, snack zvinhu zvinovharira nzira - uye sekunge izvo zvanga zvisiri zvekupenga zvakakwana, iwe unofanirwawo kutsungirira zvakataurwa ne "vamwe vatambi" vako vanoperekedza zvese zvinoitika anecdotes. Muhuswa hurefu iwe uchasangana nekusangana kwakangoerekana kwaitika sezvaunozviziva kubva kuPokemon, pakati pezvimwe zvinhu.
Tiny Tinas, mutongi webongozozo uye chikonzero chekunyanya mhirizhonga. Kwakabva: game point
Pasinei nezvakawanda zvekuita, zvinotora nguva kuti Tiny Tina's Wonderlands itore kukurumidza. Kunyanya kutanga dzimwe nguva kunotukisa nekuti iwo akasiyana evanopikisa anosiya zvakawanda kuti zvidiwe. Uye pane imwe nguva wakadyiswa nemamiriro emutambo. Zvese zvine tekinoroji inotyisa uye inoshandiswa mune inozivikanwa cel-shading kutaridzika, asi haugone kuzunungusa manzwiro ekuti vagadziri vakaisa nemaune mabhureki - nenzira, izvi zvinoshandawo kuna Tina Tina degree rehupenzi. Panguva ino tenzi wegomba haana kutsemuka mupfungwa sezvatinomuziva. Izvi zviri kunetsa padanho repamusoro, shure kwezvose, nekuti Tiny Tina's Wonderlands inonakidza, inosekesa, uye inokurudzira. Uye nekuda kwemashiripiti, kuenderera mberi kwakajeka kuBorderlands 3 kunogona kunzwikawo maererano nekutamba. Iyo yekufungidzira loot shooter inoratidza kusimba kwayo kunyanya mukukurumidza kurwa: iyo yatove-yakazara maitiro maitiro anowedzera simba kuburikidza nehunyanzvi hwemashiripiti. Nekuti iwe unogona kushandura hunyanzvi hwekuita uye kusarudza yechipiri kirasi gare gare mumutambo, zvakasiyana zvinouya mukutamba.
Zvombo zvinopa zvakasiyana-siyana zvinodiwa. Kune akawanda acho - kubva demo kusvika kune pfuti ye sniper. Nekusarudza pfuti, unonatsa matambiro ako ekutamba, uchinatsa kuita kwekirasi yako gamba. Simba rinopinda rakakura uye unogona kunzwa izvozvo, kunyanya nezvombo zvemelee. Kurova kunoita kunge kune simba, zvisina musoro kukuvadza dzimwe nguva kunosiya zvakawanda kudiwa. Pakazara, zvisinei, iyo melee system ndeyekuwedzera kukuru. Zvombo zvenhoroondo zvinokupa simba rakawanda, asi zvinotora nguva kuwana yekutanga. Chero zvazvingava, kumirira kwakakodzera, nokuti migumisiro yebhonasi haingotaridzi zvakanaka chete, asiwo inokonzera kukanganisa kwakawanda kana kupa humwe hubatsiro. Iyo gameplay dzimwe nguva inoita kuti izvi zvidikanwe, nekuti mamwe mabhosi anorwa ane hunyengeri.
Pfungwa inonakidza: Iyo yakavanzika RPG dice ine kupamba uye kupa mabhonasi. Kwakabva: game point
Pakazere, mutambo wemutambo wemushandirapamwe wenyaya uye inotevera grind inopa kunakidzwa kwakawanda. Kuseka kunobata chiratidzo, kana kwete nguva dzose. Uye zvine mutsindo, Tiny Tina's Wonderlands inotaridzika zvinovhiringa zvakafanana neiyo yakakosha sisitimu yeBorderlands, asi zvakadaro inozvidzoreredza pachayo kuburikidza nekumisikidza kwekufungidzira. Mukupedzisira, vagadziri veiyo loot shooter vakaita zvakanaka nekuti vakasanganisa nehungwaru izvo zvakajairika uye zvitsva.
Subgenre: Loot Shooter
Chekutanga, kana iwe uchida Borderlands, iwe zvakare uchafarira Tiny Tina's Wonderlands. Sei? Nekuti mutambo hausi 1: 1 kopi yeBorderlands, asi ichiri yakafanana neyekutanga. Iine fungidziro yekutamba-mutambo Gearbox's new loot shooter yakapihwawo yakasimba yakasarudzika nzvimbo yekutengesa. Mushandirapamwe, unotora kusvika maawa makumi matatu, unonakidza uye mutambo wemutambo unonakidza. Kwete zvishoma nekuti musanganiswa wepfuti yakanaka nemashiripiti inobudirira. Kurwisana nemhomho yevapikisi kunotonyanya kukurudzira kana iwe uchigadzirisa hunhu hwako kune zvaunoda iwe pachako. Iyo tabletop satire inouya nemazano akakodzera kutorwa zvakakomba sezita rine mutengo wakazara.
Tiny Tina's Wonderlands zvakare yakasimba kana iwe ukasiya nzira dzakatsikwa - kureva mutsara wekutsvaga - uye kupedzisa dzimwe nguva dzinosekesa zvakanyanya mabasa epadivi. Zvose mune zvose, kuseka, pamwe chete nekuchera kwaro pamitambo yekutamba-maitiro uye kuguma kwekuita-yekuita, ivimbiso yekuseka.
Tiny Tina's Wonderlands haisi sham kana hunyengeri, nokuti Gearbox yakangoisa ruoko pamutambo wemutambo apo zvaive zvakakodzera kune pfungwa yemutambo: somuenzaniso, mukurwisana kwepedyo kana mukurwiswa kwemashiripiti. Pakazere, shanduko dzakaenzaniswa neBorderlands dziri pamucheto - pamwe nekuti zvanga zvisina kufanira kugadzirisa zvachose mupfuri akanaka kwazvo. Pakupedzisira, Tiny Tina's Wonderlands inenge yakanaka kwazvo, kunyange inotyisa mune zvimwe zvikamu - chero ipi zvayo zviri nani kudarika Borderlands 3. Zvakanakira uye zvisingabatsiri zvekupamba shooter series zvinosanganiswawo mu-full-price spin-off. Vanopikisa kazhinji vanongove kanon fodder; zvakapambwa zvakawanda asi kazhinji zvisina maturo; nyaya yacho inonakidza uye yakamonyoroka, asi inokwenya pamusoro; kurwa kunokurumidza uye kune simba, asiwo zvakare nyore; Random inosangana yakatambanudzwa nguva yekutamba, asi pakupedzisira unonzwa kushomeka. Matanho matatu ekuomerwa anowanikwa kune vatambi kuti vagone kuvandudza mwero wekunetsa kunze kwekurwa kwemaboss, izvo zvakaderera zvachose.
Zvakadaro: Tiny Tina's Wonderlands inoburitsa yakajairika kutenderera kwekupindwa muropa mushure mekunge wawana pamusoro pekutanga kwakaoma. Paunenge uchingotanga kugadzirira uye kuumba gamba rako zvinoenderana nekuravira kwako pachako, iyo varaidzo yakakosha inokwira mudenga.
Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition [Playstation 4] * 69,99 EUR tenga
Tinina Tina Anoshamisa
mhedziso Tiny Tina's Wonderlands chaizvoizvo Borderlands - uye chinhu chakanaka. Iyo medieval yekupfura gallery inonakidza uye inosekesa kubhoti; zvose kazhinji, asi kwete nguva dzose, kunyanya mumusanganiswa uyu. Wese munhu anofanirwa kutamba kusvika kune yekutanga ngano chombo uye chete ipapo zvibodzwa.
Kare Zvakavanzika zvekubudirira kwemitambo
Inotevera Mhuri mutambo mutsva paHUCH!: Mambo weMupata
Mutambo Wezvigaro: Iyo Bhodhi Game - yedhijitari bhodhi mutambo munguva pfupi iri kutevera paSteam
Animal Kuyambuka - New Horizons: Kuburitswa kune yakakosha edition yeNintendo Chinja
Cyberpunk 2077: Big Updates Kuuya / Kudzorera Kunogoneka
Kune vateveri veSciFi: XCOM - bhodhi mutambo wakaziviswa